1. automatisation avo lenta miaraka amin'ny PLC, ny detection photoelectric ho an'ny sakafo ara-nofo mba hisorohana ny fandanindaniam-poana sy ny fitoniana avo.
2. manafatra horonan-taratasy fanapahana, tsy misy burr ary maharitra ampiasaina
3. Fahanana ara-materialy amin'ny motera sever, marina amin'ny fanitsiana ny toeran'ny tadin'ny sofina sy ny welding. kely ny habeny, fampisehoana matanjaka sy tsy azo atokisana amin'ny alim-baravarankely vita amin'ny firaka.
4. 20k ultrasonic welding loop loop, matanjaka amin'ny ampahany welding ary misintona.
5. Fitaovana patanty, teknolojia mitarika, dingana matotra, kalitao miorina ary fahombiazana avo lenta.
Haben'ny milina 5810 * 2400 * 1700mm
Fivoahana 40-45 pcs / min
fahefana 5,8 KW
Fanamarihana Ny fikolokoloana sy ny famonosana fiara dia tsy voatery
Teo aloha: Masinina fanamafisam-peo amin'ny masom-bava 3D
Manaraka: Masinina Maskara 3D mandeha ho azy (miaraka amin'ny rafitra detection CCD sy ny famonosana fiara)